Mpifindramonina ny Ampahatelon’ireo Mponina ao Riace, Vohitra ao Calabre · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2017 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, русский, Italiano
Riace, sary tao amin'ny tranonkala Italia che cambia.
Nandritry ny taona maro, taorian'ny fifantohan-tsain'izao tontolo izao noho ny nahitàna ireo Bronzes de Riace tamin'ny 16 aogositra 1972, niverina niala aina niadana teo indray ilay kaominin'ny faritanin'i Reggio ao Calabre, tanàna nanome ny anarany ho an'ireo sarivongana, lahatra ifampizaràn'ireo kaominina kely maro any ambanivohitr'i Italia, indrindra fa ireo any atsimo.
Avy eo, tamin'ny 1998, ny fahatongavan'ny andianà Kiorda mpifindramonina niisa 200 no nanome aina vaovao indray ho an'ilay vohitra : hain'ireo mponina ny namadika ilay loza nateraky ny fahatongavan'ireny traboina ireny ho lasa fanararaotra. Tantarain‘ny sarimihetsika “Vohitra iray ao Calabre” ny fomba natao :
Zavatra niarahana nahafantatra ny hoe tonga saina momba an'i Riace izao tontolo izao. Mifanohitra amin'izany, tsy dia nahafantatra loatra hoe mba hahafantarana azy dia eo koa ny sarimihetsika.
“Vohitra iray ao Calabre” dia sarimihetsika novokarina tao Riace ary asan'ireo mpanatontosa Shu Aiello sy Catherine Catella.
Tantaran'i Rosa Maria no ao anatiny izay nandao an'i Riace, toerana nahaterahany, indray andron'ny lohataona 1931, mba handeha hila ravinahitra tany Frantsa. Hatreo, trano nilaozan'ireo lasa niondrana ka zary rakotry ny liera, ary tany niha-nahantra no sisa hitan'ireo mponina tao Riace. Indray andro, avy any an-dranomasina tany, tonga ny zahatra iray nitondra kiorda mpifindramonina niisa roanjato. Nomena ho an'ireo mpifindramonina ireo trano nilaozan'ny mpila avinahitra tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Izy ireny no nanavao sy nanatsara azy. Amin'izao fotoana izao, anaran'ireo mponina ao amin'ilay vohitr'i Calabre ny hoe Roberto, Ousmane, Emilia, Mohamed, Leonardo, Taira. Tsy dia manan-javatra goavana manao ahoana ireo mponina, kanefa dia miaraka manorina isanandro ny hoavy iraisany izy ireo. Tantaran'ny fari-piadidiana sy vohitra iray nahay nitsinjo lavitra izy io, tamin'ny famadihana ho andraikitra ny fandraisana sy fampidirana ireo mpifindramonina. Misy mpipetraka indray ankehitriny ireo trano nilaozan'ny tompony ary dia miverina miaina ilay vohitra, noho ny tetikasa Futura tarihan'ny ben'ny tanàna Domenico Lucano, ampian'ny fiarahany miasa amin'ireo mpifindramonina.
Nahasarika ny sain'ireo media sy politisiana ao an-toerana ary ny avy amin'izao tontolo izao ny politikam-pandraisana mpifindramonina ampiharin'ity ivontoerana kely ity, sy ny an'ireo kaominina hafa. Ao amin'ny fampidirana ny tafa nifanaovana tamin'ny ben'ny tanàna Domenico Lugano, izay efa ao anatin'ny fotoana fahatelo itondràny, dia hoy ny infoaut manampy hoe :
Raha namakivaky ny Làlam-pirenena faha 106, mandalo eo Riace Marina, dia taitra nahita endrika roa vita sary eo amin'ny rindrin'ny gara. Raha mijanona ka mihemotra kely mba hijery, dia voamarina ireo ahiahy isankarazany tao an-tsaina : eo amin'io rindrina io no misy sarin'ny Bronze de Riace iray sy ny an'i Matteo Salvini,mpitarika ny Ligin'ny Avaratra. Eo ambanin'ilay voalohany no misoratra ny hoe “navotana tany an-dranomasin'i Riace”, fa eo ambanin'ilay faharoa kosa “navotana tao an-dranomasin'ny hagaigena isankarazany”.
[…] raha toa ka hoe momba ireo sarivongana navotana avy tany amin'ny ranomasiny fotsiny, mety ho zara raha nisy heno ny aminy. Ny tsara indrindra tany amin'ny folo taona tany ho any, rehefa injay ny ben'ny tanàna, notohanan'ireo mponina teo an-toerana, nandray fanapahankevitra hanao izay hitomboan'ny mponin'io vohitra nilaozan'ny tompony io, amin'ny fandraisana an-tànan-droa ireo mpifindramonina. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nitety izao tontolo izao ny tantaran'ity tanàna kely ao Calabre ity, lasa sarimihetsika fohy notontosain'i Wim Wenders, nankafizin'ny Papa François ary dia voahosotry ny gazetiboky Fortune ho olona iray amin'ireo matanjaka indrindra ny ben'ny tanànany.
Ny hevitra dia ny fitadiavana fifamatorana sy fiarahana miasa eo amin'ny mponina ao an-toerana sy ireo mpifindramonina, mifototra amin'ny fanaingana indray ny kolontsaina sy ny toekaren'ilay vohitra, “amin'ny fanararaotana” ireo otrikarena entin'ilay rafitra fandraisana, sy amin'ny alàlan'ny fandrindràna miainga eny ifotony avy amin'ireo olona marobe mirotsaka an-tsehatra ao anatin'ilay tetikasa. Mampiantrano mpifindramonina 500 amin'ireo mponina 1500 ao aminy ankehitriny i Riace.
Tsy lany hevitra ny ben'ny tanàna Domenico Lucano mba hametrahana ny politikam-pandraisana sy fampidirana ireo mpifindramonina ho ao anatin'ny tambatselan'ny ara-tsosialy sy toekaren'ny kaominina tantaniny. Ny farany indrindra dia ny namoronana ny “volan'ny kaominina”. Hoy ny fanazavan'ny tranonkala felicitapubblica.it, izay milaza tena ho vavahady misahana ny resaka toekarena sivily, tamin'ny 360 degrés:
Ato amin'ity vohitra ity, tsy tonga ara-potoana ireo fanampian'ny Spar (Rafitra fiarovana ho an'ireo mpangataka fialokalofana sy mpifindramonina), toy ny any an-toerana hafa eto amin'ny firenena ihany, miteraka fanelingelenana ho an'ireo sampan-draharaha mpandray vahiny. Noho io antony io, nanome làlana ho an'ny fandraisana andraikitra iray “tena henjana miainga avy any ifotony” ny ben'ny tanànan'i Riace, Domenico Lucano, tamin'ny nametrahana vola iray fampiasa ao an-toerana ary azo avadika ho Euro, ary ahafahan'ireo mpivarotra ao an-toerana mampitrosa ireo mpifindramonina. Amin'io fomba io, miangona ao ny trosa saingy voahilika rehefa tonga ny fanampiana, fa eo anelanelan'ireo dia omena zo ireo mpifindramonina mba hanana fahafahana mividy.
Noho ny fahaizamanao nananan'ny ben'ny tanàna, Domenico Lucano, dia afaka manantena ireo tena vola taratasin'ny banky ry zareo mpifindramonina, misanda 1, 2, 5, 10, 20 sy 50 euros izay ny sarin'ireo olona nalaza no hita eo aminy, toy ny an'i Martin Luther King hatramin-dry Peppino Impastato, mandalo amin-dry Che Guevara, tonga hatrany amin'i Mahatma Gandhi.
Nahazoan'ny ben'ny tanàna maripankasitrahana maro io politikany io. Iray amin'ireny ity iray ity, tany ampiandohan'ity taona ity, ny Loka Iraisampirenena “Dresden-Preis” momba ny Fandriampahalemana avy amin'ny Fondation Klaus Tschira, mitentina 10 000 euros. Momba io fotoana io, manoratra ny aise.it hoe :
Ity no anton'ilay fanolorana loka, nohazavain'i Günter Blobel, nahazo ny loka Nobel ary mpiara-manorina ny Dresden-Preis : “Tsy fahita firy ny hoe ben'ny tanàna kely lavitra ireo tanàndehibe eto amin'izao tontolo izao no mahavita mampiasa loha ireo mpitarika firenena matanjaka. Vitan'i Domenico Lucano izany, tamin'ny fametrahana ny fitserana ny olona toa azy ho masontsivana tokana handraisana ireo mpifindramonina. Raha any amin'ny toerana hafa kosa indray dia fefy no atsangana ary atao ady varotra ny isan'ireo ho raisina, efa 18 taona izao i Riace no mandray olona nandositra ady sy fahantràna. Ary dia mifanohana sy mifamonjy – ireo mponina sy ny mpifindramonina, miaraka amin'ireto farany izay mamonjy ilay vohitra kely ao Calabre tsy hiharan'ny fitontongan'ny isan'ny mponina. Araka izany, ao Calabre, iainana ilay antsoin'i Domenico Lucano hoe “nofinofin'ny laoniny”. Ao anaty tontolo iray izay betsaka foana ny olona voatery mandao ny taniny, tsy misy ilàna matahotra vahiny izany, tsy misy ilàna fankahalàna, fa ny mifanohitra amin'izay aza, ilaina betsaka ny vohitra toa an'i Riace sy olona feno fahavononana ary olombelona toa an'i Domenico Lucano”.
Ilay vohitra, sy ireo hafa nisongadina noho ny fahavononan-dry zareo handray, dia lasa aingampanahy ho anà sarimihetsika iray hafa, “Il Volo” an'ilay mpanatontosa, Wim Wenders, notontosaina teo ambany fiahian'ny Kaomisarià Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana miahy ireo Mpitsoaponenana.
Tao anaty lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2009, mitantara ny bilaogy viverecalabria :
“Il Volo”, lohatenin'ny tsanganasan'i Wenders, dia tantara iray momba ny fandraisana sy ny tena zavatra nitranga marina tao Badolato, Riace, Caulonia ary Stignano, taorian'ny nahatongavan'ireo kiorda mpifindramonina tamin'ny 1997. Ny Faritra Calabre, voalohany tao izay nametraka lalàna mba hampiroboroboana ny fampidirana ireo mpifindramonina ho ao anatin'ny fiarahamonina, dia mpiara-miketrika ilay sarimihetsika ary handrotsaka ny vola azony ho famatsiana ireo tetikasa mitodika amin'ny fandraisana sy ny fampidirana ho anaty fiarahamonina.
Amin'ìzao andro izao no tonga ny vaovao hoe misy andian-tantara kely ho an'ny fahitalavitra omanin'ilay mpisehatra, Beppe Fiorello mba hitantarana ireo “tranga” tao aminà vohitra iray sy ny ben'ny tanànany izay nanova ny fahabangàna ho fotoana iray fanararaotra : mpila ravinahitra tonga any amin'ny hoe olompirenena mpifindramonina”.
Tantaran'ny Fifindràmonina farany
07 Mey 2021El Salvador
06 Mey 2021Espaina